ASAN-DAHALO TAO AMBATO BOENY : Tafaverina ireo takalon’aina miisa 6 sy ny omby 64
Na dia manjaka aza ny halatr’omby manerana ny faritra amin’izao fotoana izao dia miezaka ny tsy hilavo lefona ireo zandary misahana ny famongorana ireo dahalo ankehitriny. 13 septembre 2017
Nahomby ny tetika manoloana izany ka fantatra fa tafaverina ireo omby nangalarin’ny dahalo tao Andrafiambilobe Fokontanin’i Tsinjorano Kaominina Manerinerina Distrikan’ Ambato Boeny, ny alahady alina lasa teo, tokony ho tamin’ny 11ora alina tany ho any. Araka ny tatitra voaray mahakasika izay fanafihan-dahalo izay dia nilaza ireo zandary tao amin’ny tobim-paritra Manerinerina fa misy dahalo mirongo fitaovam-piadiana miisa enina niditra tao an-tanàna ka lasa tamin’izany ireo omby miisa 64 voalaza etsy ambony.
Tsy izany irery ihany anefa no nalain’ireo malaso fa niampy zaza amam-behivavy niisa enina, noentina nampihorohoroana ny iray tanàna. Tonga dia nanao ny fanarahan-dia ny mpitandro filaminana raha vao avy nandre ny zava-nisy.
Marihina fa mbola teo an-tanàna ihany ireto dahalo ka tratran’ny zandary tsy satry. Niezaka nandositra ireto farany saingy raikitra ny fifampitifirana ka vaky nandositra ihany. Tavela araka izany ireo omby ary avotra soa aman-tsara ihany koa ireo olona saika lasa takalon’aina. Ny iray tamin’ireto takalon’aina kosa dia voalaza fa naratra vokatry ny fifampitifirana saingy efa nahazo fitsaboana ara-dalana any amin’ny Hopitaliben’i Mahajanga. Hatreto aloha dia nilaza ny teo anivon’ny Tobim-paritra Manerinerina ny amin’ny tsy hipetraham-potsiny amin’izao fa mbola hitady hevitra hanatratrarana ireo malaso mihaodihaody ao amin’ny Faritra iadidian’izy ireo.
Manentana ny fiaraha-miasa amin’ny vahoaka ihany koa izy ireo mba hitohy hatrany izany satria dia manamora ny fomba fiasan’izy ireo izany ankehitriny.
Ny Borigadin’i Manerinerina no nanamafy fa misahana izany.